Akụkọ - LOFT EYEWEAR SHOW
AKWKWỌ AKW SHKWỌ AKWYEKWỌ
LOFT Eyewear egosi bụ Premiya onwe ha okomoko eyewear omume na-eme kwa afọ na New York City, Las Vegas na ugbu a San Francisco. Kemgbe afọ 2000, ihe omume LOFT egosipụtala ndị na-ekepụ iche na ndị na-egbusi ndị si n'akụkụ ụwa niile.
Anyị bụ otu ndị nwere otu obi, ndị na-emepụta onwe ha, ndị nwere oke mmụọ maka imepụta ọmarịcha anya, oge ụfọdụ na-atọ ọchị, mgbe ụfọdụ, mkpuchi anya mara mma maka ndị ahịa nwere nghọta. Anyị kwenyere na ndị na-ere ahịa akpụkpọ anya nwere onwe ha ga-emezi ma tinye ya na okpokoro agba anyị ndị ọkachamara na ịkwa akwa anya anyị na ndenye ọgwụ na mkpa ihu nke onye ọrụ njedebe.
Anyị dị iche iche na-eru nso chepụta naanị ike anyị nkịtị ọhụụ aka eyewear styling kamakwa, ọtụtụ ihe, nwere fun. Nchịkọta nnwere onwe anyị sitere na US, France, UK, Italy, Denmark, Germany, Austria na Switzerland.
Ebe nzuko dika ndi nwere obi uto. Branddị ndị sitere na Kirk & Kirk, Anne Et Valentin, Blake Kuwahara, Salt na ụfọdụ na-enye gị ohere iji ehihie n’okpuru otu ụlọ na-ahụ ọtụtụ ụdị ma na-ekere òkè na ntụkwasị obi ụbụrụ nke echiche na ahụmịhe. I nwedịrị ike izu ike iji lee echiche site n'elu ụlọ ma kupụ ume tupu ị kụrụ ala ngosi.
Ulo elu bụ echiche dị egwu nke na-alụ ndị na-ere ahịa okomoko kachasị mma na ụdị ndị nwere onwe ha. Ọ bụ gburugburu na-akwalite ịkparịta ụka n'andntanet na creativity n'ime okomoko anya akwa obodo. Ana m atụ anya mgbe niile ịhụ atụmatụ ọhụrụ sitere n'aka ndị nrụpụta pụrụ iche na ndị ọhụụ.
Ulo elu bụ ebe zuru oke… ndị niile na-ere ahịa dị elu n'otu ebe, nnukwu ikuku na ị na-ahụ ndị ọgbọ gị niile n'otu ebe. You nwere ike ịnọdụ ala ma rie nri ehihie ma chụkwute ndị ọrụ dịka uche si n'ofe mba ahụ feeling inwe mmetụta chiri anya karị.
“… Ọ dị m ka ọ bụ ihe ezi uche dị na ya ịchọpụta ụzọ dị iche nye onye ọ bụla ọzọ”